Sarudza maitiro ane hunhu anosanganisa kuzvipira uye hunyanzvi
Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 22, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Buda mafomula eemail inobata basa
Iwo ekutanga uye ekupedzisira mazwi eemail akakosha zvakanyanya. Izvi zvinosarudza chiyero chekubatana chemutori wako. Pane zvinhu zviviri zvakakosha pakupedzisa iyo ine hunyanzvi email: iyo yekubuda fomula uye ine hunhu fomula. Kana chinhu chekutanga chikazivisa nezvechinangwa cheanotumira, chechipiri chinoteerera mafomula akanyatsogadziriswa.
Nekudaro, kuti inzwikwe uye ifadze, mutsara wekuremekedza unofanirwa neimwe nzira yekusarudzika pasina kupa ruremekedzo. Tsvaga pano mamwe mafomula ekubuda eemail inoshanda nyanzvi.
"Ndiri kutarisira mhinduro yako ye...": Mutsara wakaomarara
Unogona kuva neruremekedzo uchiramba wakatsiga mune zvaunotaura. Chokwadi, kutaura kweruremekedzo kwerudzi rwekuti "Pending your answer ..." hazvina kujeka. Nekutaura kuti "Ndiri kutarisira mhinduro yako ye ..." kana "Ndokumbira undipe mhinduro yako usati ..." kana kunyange "Unogona kundipindura here usati ...", uri kuhaya mutauri wako.
Wokupedzisira anonzwisisa kuti nguva isati yasvika, ane musengwa wetsika wokukupindura.
"Ndichishuvira kukuzivisai zvine mutsindo ...": Mushonga unotevera kusanzwisisa
Munguva dzemakakatanwa, kuti upindure kuchikumbiro chinoda kana chisina kufanira, zvinodikanwa kushandisa nzira yekusimbisa asi ine ruremekedzo. Kushandiswa kwemutsara wokuti "Kuda kukuzivisa zvinobudirira ..." kunoratidza kuti hausi kuzomira ipapo uye kuti unofunga kuti wakanyatsojeka.
"Kuda kuchengetedza kusavimbika kwako ...": Nzira yekuyananisa
Mutauro wekutengesa wakakoshawo zvikuru. Kuratidza mutengi wako kuti unotarisira kuchengetedza hukama hwebhizinesi kwenguva yakareba sezvinobvira ndiko kuvhura kwakanaka.
VERENGA Natsiridza yako yekunyora maitiro: zvine musoro zvinongedzo
Kune zvakare mamwe mafomula anonyatso gara akadai sekuti "Kuda kukwanisa kupindura zvakanaka kuchikumbiro chako chinotevera" kana "Kuda kukwanisa kukupa mutero pane yako inotevera odha".
"Ndafara nekukwanisa kukuunzira kugutsikana": Formula mushure mekugadzirisa kusawirirana
Zvinoitika kuti muhukama hwebhizimisi kukakavara kana kusanzwisisana kunomuka. Kana mamiriro ezvinhu aya aitika uye ukakwanisa kuwana mhedzisiro yakanaka, unogona kushandisa fomula iyi: "Ndinofara kuona mhedzisiro yakanaka kuchikumbiro chako".
"Neruremekedzo": Chimiro chekuremekedza
Uyu mutsara une hunhu unoshandiswa pakutaura kune maneja wemutsara kana mukuru. Kunoratidza kuva nehanya uye chiratidzo chokuremekedza.
Pakati pemaitiro anoshandiswa, tine aya: "Neruremekedzo rwangu rwose" kana "Nokuremekedza".
Chero zvazvingava, zvakakosha kushandisa fomula ine hunhu inogona kuwedzera kushanda kwekutsinhana munzvimbo yehunyanzvi. Asi iwe zvakare uchawana zvakawanda nekutarisira zviperengo uye syntax. Hapana chakashata kupfuura kuperetwa kana kusapetwa bhizinesi email.
Sarudza maitiro ane hunhu anosanganisa kuzvipira uye hunyanzvi Mbudzi 22nd, 2021Tranquillus
pashureZviri nani kutumira maemail kana kuti tsamba?
zvinoteveraKupera kwetsamba, maitiro ane hunhu ekusiya
Nyanzvi yeemail siginecha
Matauriro anehuremekedzo ekudzivirira mune email yehunyanzvi
Nyora mushe pabasa: pen kana keyboard?